ရခိုင်ပြည်နယ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုရေးလို့ မြန်မာက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ကန့်ကွက် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ရခိုင်ပြည်နယ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုရေးလို့ မြန်မာက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ကန့်ကွက်
ရခိုင်ပြည်နယ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုရေးလို့ မြန်မာက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ကန့်ကွက်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထုတ် သတင်းစာတချို့မှာ ရခိုင်မှာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်နေမှုလို့ စွတ်စွဲရေးသားနေတာကို မြန်မာအစိုးရက ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Mohammand Sufiur Rahmanတို့ တွေ့ဆုံတုန်း ဒုဝန်ကြီးက ကန့်ကွက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုဝန်ကြီးက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထုတ် သတင်းစာအချို့မှာ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပြဿနာရပ်များကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်နေမှုလို့ စွပ်စွဲရေးသားဖော်ပြခဲ့ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံ ရေးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေးကို အဟန့်အတားဖြစ်စေ နိုင်တဲ့အတွက် ကန့်ကွက်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာရဲ့ ဖိအားပေးမှုကို အသုံးပြုခြင်းထက် နှစ်နိုင်ငံအကြား ထိတွေ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ ၊ နှစ်နိုင်ငံအကြားရှိပြီးဖြစ်တဲ့ ဆွေးနွေးမှုယန္တရားများ ပြန်လည်ကျင်းပဖို့၊ အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ဖို့၊ သတင်းအချက်အလက် ဖလှယ်ရေး ၊ နယ်စပ်ဆက်သွယ်ရေးရုံးများ ဖွင့်လှစ်ရေးကိစ္စ၊ နယူးယောက်မြို့မှာ ဝန်ကြီးအဆင့် နှစ်နိုင်ငံချင်း တွေ့ဆုံရေး ကိစ္စရပ်များအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးသတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
……………………………။ ။ ……………………………
ရခိုငျပွညျနယျ လူမြိုးတုံးသတျဖွတျမှုရေးလို့ မွနျမာက ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ကို ကနျ့ကှကျ
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံထုတျ သတငျးစာတခြို့မှာ ရခိုငျမှာ လူမြိုးတုံးသတျဖွတျနမှေုလို့ စှတျစှဲရေးသားနတောကို မွနျမာအစိုးရက ကနျ့ကှကျခဲ့ပါတယျ။
စကျတငျဘာ ၁၂ ရကျနကေ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီး ဦးကြျောတငျနဲ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Mohammand Sufiur Rahmanတို့ တှဆေုံ့တုနျး ဒုဝနျကွီးက ကနျ့ကှကျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒုဝနျကွီးက ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံထုတျ သတငျးစာအခြို့မှာ ရခိုငျပွညျနယျ မောငျတောမှာ ဖွဈပှားနတေဲ့ ပွဿနာရပျမြားကို လူမြိုးတုံးသတျဖွတျနမှေုလို့ စှပျစှဲရေးသားဖျောပွခဲ့ခွငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး နှဈနိုငျငံဆကျဆံ ရေးနဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု မွှငျ့တငျရေးကို အဟနျ့အတားဖွဈစနေိုငျတဲ့အတှကျ ကနျ့ကှကျတယျလို့ ပွောကွားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ရခိုငျအရေးနဲ့ပတျသကျပွီး နိုငျငံတကာရဲ့ ဖိအားပေးမှုကို အသုံးပွုခွငျးထကျ နှဈနိုငျငံအကွား ထိတှညှေိ့နှိုငျးဆှေးနှေးခွငျးနဲ့ ဖွရှေငျးဖို့ ၊ နှဈနိုငျငံအကွားရှိပွီးဖွဈတဲ့ ဆှေးနှေးမှုယန်တရားမြား ပွနျလညျကငျြးပဖို့၊
အကွမျးဖကျမှု တိုကျဖကျြရေးအတှကျ နှဈနိုငျငံပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားပွုလုပျဖို့၊ သတငျးအခကျြအလကျ ဖလှယျရေး ၊ နယျစပျဆကျသှယျရေးရုံးမြား ဖှငျ့လှဈရေးကိစ်စ၊ နယူးယောကျမွို့မှာ ဝနျကွီးအဆငျ့ နှဈနိုငျငံခငျြး တှဆေုံ့ရေးကိစ်စရပျမြားအပျေါ အမွငျခငျြးဖလှယျ ဆှေးနှေးခဲ့ကွတယျလို့ နိုငျငံခွားရေးသတငျးမှာ ဖျောပွပါတယျ။ (USA)
Previous articleSME Working Committee ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ဖို့ ရှိ
Next articleIS က မြန်မာကို တိုက်ဖို့ရှိတယ်လို့ အင်ဒိုရဲချုပ် သတိပေး